Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Wadahadalka NBI ee labada dhinac ayaa isku horfadhiya
Wadahadalka NBI ee labada dhinac ayaa isku horfadhiya
October 17, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Waxaa magaalada Nairobi ka socda wadahadal udhaxeeya dawladda Ethiopia iyo ururka ONLF garabka Maxamed Cumar Cismaan. Haddaba iyadoo saxaafadda taageerta kooxdan iyo warbaahinta Deegaankuba ay maalmahan hadal heyso arintan ayna jiraan dad badan oo ka dhursugaya waxaa warbaahinta Xaajo usuuro gashey inay faahfaahin dheeraad ah ka hesho qaaabka wadahadalka iyo cidda ka qaybgalaysa.
Shirkan Nairobi kasocda ayaa kamid ah taxanayaal kulamo ah oo masuuliyiin Kenyan ah ay dabqaadkeeda bilaabeen muddana ku jireen balse waxaa hadda la isaga baxay labada dhinac ee ay arintu khuseyso.
Haddaba ayaa isku horfadhiya labada dhinac?. Garabka Admiraalka ayaa saxaafaddooda ku shaaciyey cidda mataleysa dhankooda iyagoo dhanka kalena ka sheegey wasiirka difaaca iyo masuuliyiin sarsare oo ka tirsan dawlada Ethiopia.
Warbaahinta Xaajo waxaa usuuro gashey iney ku dhawaato madasha shirka ayna ka hesho xog dhab ah oo sheegeysa qaar kamid ah ragga fadhiya.
Dhanka Garabka Admiraalka waxaa hoggaaminaya Cabdiraxmaan Maaddey waxaase ku weheliya Diirane, Sheekh Deeq iyo Sulub iyadoo warar hoosena ay sheegayaan in shirka loo diidey inuu ka qaybgalay masuulka kooxdan u qaabilsanaa dhanka Warfaafinta Xuseen Nuur iyadoo aan la garaneynin sababta dhabta ah ee looga reebey. Waxaa kale oo shirka jooga Safiirka dawladda Ethiopa u fadhiya waddanka Kenya Shamsaddiin.
Haddaba dhanka dawladda Ethiopia waxaa iyana kasocda saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan ciidamada ka hawlgala gobolka Bari ee Ethiopia (Hararge) iyo masuul ka tirsan xukuumadda Deegaanka Soomaalida ahna kuxigeenka xafiiska dakhliga horeyn u ahaan jirey guddoomiyaha gobolka Jijiga laguna magacaabo Mawliid Haayir oo isagu matalaya xukuumadda Deegaanka Soomaalida.
Wadahadalka iyo dhamaadka dagaal ee Deegaanka ragaadiyey ayaa ah mid aad loosoo dhaweeyo waxaana la marayaa xilli ay suuro gal tahay in la sameeyo ama lagu dhawaaqo xabad joojin ka hirgasha gudaha deegaanka.
Qaybihii hore ee wadahadalka ayaa loo sheegey Kooxda Admiralku iney keenaan shirka ragga dagaalka ku jira si aysan hadhoow udhicin in ragaan waxba ogeyn oo aan waxba ka goin ay wadahadal u galaan sidaasaana loogu yeedhey Sheekh Deeq iyo Sulub iney yimaaddaan shirka.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in labada dhinac isla gaadhaan in lagu dhawaaaqo xabad joojin ka hirgasha gudaha waddanka oo ah qaybta ugu muhiimsan heshiiska.
Warbaahinta Xaajo ayaa barnaamijyadeena danbe kusoo qaadan doonaa falanqaynta shirkaas iyo qodobada heshiiskaba ee ha moogaan.